Ndị na-emepụta ọrụ na ndị na - ebubata ya - Serviceslọ Ọrụ Ọrụ China
Kitchen Ngwongwo Plastic akpụzi
Kedu ihe bụ onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ? Usoro ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ bụ mgbakọ nke ihe ndị na-ekpo ọkụ na-eji ihe eji akpụnye plastik na-agbanye plastik a wụrụ awụ n'ime oghere nke ebu. (The cavities bụ akụkụ nke ebu yiri akụkụ ndị a ga-emepụta.)… A na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ usoro na-agụnyekarị ...
Ijikọ nkwụnye Ọgwụ akpụzi
Ebu ndị na-agba ọsọ oyi Na sistemụ ndị na-agba oyi, ndị ọgba ọsọ na-arụ ọrụ n'otu okpomoku dị ka ndị fọdụrụ na ebu ahụ na-enweghị usoro kpo oku ọzọ. A na-ajụ sprue, onye na-agba ọsọ, na ọnụ ụzọ ámá niile tinyere ebu na plastik ndị ọzọ fọdụrụ na akụkụ ahụ ma ọ bụ wepụ iche iche (dabere ...
Plastic mkpuchi akpụzi
Ekpo ọkụ na-agba ọsọ ma ọ bụ oyi na-agba ọsọ n'ihi na unu ogwu ebu? Plastic injection ịkpụzi bụ oké oke maka n'ichepụta akụkụ. Agbanyeghị, nwere ụfọdụ echiche na igwe nke ndị chọrọ ị nweta ọrụ kwesịrị ịghọta mgbe ọ bịara n'ịmepụta ma wuo ebu. Ebu nwere ọtụtụ akụkụ na nhọrọ ...
Onye na-akpụ akpụ Fans
Ọkpụkpọ Na-agba Ọsọ Na-agba Ọsọ: Ọsọ na Ahịa Ahịa ndị na-agba ọsọ dị adị maka otu ihe: ozugbo plastik mejupụtara oghere ebu ma mee ka ọ dị jụụ, o mejuwokwa ndị ọgba ọsọ. Ọ bụrụ na a hapụrụ naanị ya, ọ ga-ajụkwa oyi ma chụpụ ya na akụkụ ahụ (dabere na ụdị ebu ahụ, ha ka ga-anọgide na akụkụ ahụ ...
Plastic Part Ọgwụ akpụzi
Electric Toothbrush akpụzi Onye kere
Kedu ihe dị iche n'etiti ndị na-agba ọsọ ọkụ na oyi? Ndị ọgba ọsọ na-ekpo ọkụ na-eji ihe nkedo ihe nkedo nke gbọmgbọm na-eji mgbapụta eme ihe, ebe ndị na-agba ọsọ oyi na-eji ihe mechiri emechi, thermoset ebu. Ọrụ bụ isi nke sistemụ ndị ọ bụla na-agba ọsọ bụ ịduzi ihe na-asọ site na sprue gaa na oghere ebu. Ndị ...
PC Plastic Ọgwụ akpụzi
Oyi vs. Ebube na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ: Kedu nke ka mma maka akụkụ ahụ gị? Plastic ịkpụzi akụkụ na akụrụngwa na-eji, si akpakanamde ụlọ ọrụ na-ahụ ike na ngalaba, na ọbụna na-ewu. N'ozuzu, a na-eme akụkụ ndị a site na iji usoro ịkpụzi ọgwụ na-akpụzi-otu n'ime ihe kachasị ọsọ na nke kachasị ...
Nkenke Plastic Electronic akụrụngwa akpụzi
Mgbe a tụlere usoro ịkpụzi ọgwụ dị mma. Ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ nke oyi — e nwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle. A-agba ọsọ na-agba ọsọ usoro eliminates ukwuu nke ihe onwunwe n'efu kere n'oge oyi na-agba ọsọ injection ịkpụzi ma ọ bụ ihe dị oké ọnụ usoro. Otú ọ dị, ọ bụ eziokwu na ndị na-agba ọsọ ọkụ na-emepụta le ...
Plastic akpụzi Manufacturing
Na-aga n'ihu mma nke ndụ na mmepụta etoju, chọrọ maka ngwaahịa Ọdịdị na-mgbe niile na-amụba, nke na-achọ ịkpụzi nwere elu ornamental na ndị ọzọ ọkaibe ọtọ imewe.
Nkenke Fanye akpụzi Manufacturing
YF akpụzi home ngwa oru plastic akụkụ emeputa soplaya enye home ngwa oru plastic ịkpụzi na n'ụlọ ngwa oru plastic injection ebu n'ichepụta.
PCB ectronic plastic ebu
Plastic Fanye Nkedo, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Akpụzi Factory, Ndị na-emepụta ebu ebu, Omenala akpụzi,